Kor u qaad madal iibka ah & alaab-qeybiyeyaasha caadiga ah ee kor u qaadaya | Mashiinka ShanGrui
Guri > Wax soo wadaban > Kor u qaad meelaha
Meesha kor u qaadista ayaa inta badan loo isticmaalaa hawlgalka si aad uhesho ee warshadaha kala duwan. Waxay leedahay codsiyada fiilooyinka ee kor u qaadida iyo hoos u dhigista gadaal, waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa si madaxbanaan si loo fududeeyo maaraynta qalabka wax lagu qabto. Si weyn u yareeysa culayska shaqada ee shaqaalaha
Cusboonaysiinta, u keena fududeynta hawlgalka. Waxay ku habboon tahay wax soo saarka ballaaran ee mashiinno kala duwan oo alwaax ah. Waa aalad hilib kale oo lama huraan ah oo loogu talagalay warshadaha waaweyn.
Shangrui Mass PSoosaarka khafiifka ah ee guddi kala duwan iyo qalab wax soo saarka qoryaha adag, iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha naqshadeynta iyo wax soo saarka mashiinnada aan caadiga ahayn.
Howlaha Dhirta Qaadashada Qalabka Xirfadaha ee loo dhinto ee warshadaha kala duwan
Meesha kor u qaadista ayaa inta badan loo isticmaalaa hawlgalka si aad uhesho ee warshadaha kala duwan. Waxay leedahay codsiyada fiilooyinka ee kor u qaadida iyo hoos u dhigista gadaal, waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa si madaxbanaan si loo fududeeyo maaraynta qalabka wax lagu qabto. Si weyn u yareeysa culayska shaqada ee shaqaalahaCusboonaysiinta, u keena fududeynta hawlgalka. Waxay ku habboon tahay wax soo saarka ballaaran ee mashiinno kala duwan oo alwaax ah. Waa aalad hilib kale oo lama huraan ah oo loogu talagalay warshadaha waaweyn.